Isiseko seembadada: Isiseko soKuthanda ukuhamba noXanduva
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » Isiseko seembadada: Isiseko soKuthanda ukuhamba noXanduva
Iindaba zaseAntigua kunye neBarbuda • Iindaba zeBarbados Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Education • Iindaba zeGrenada Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Resorts • Xanduva • Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zeTurks kunye neCaicos • Iindaba ezahlukeneyo
Umsebenzi obalaseleyo we Isiseko seembadada ukuphuhlisa uluntu lwaseCaribbean kunye nokukhuthaza ithemba kubomi babantu bommandla kuye kwavunywa kwakhona njengoko kwathiwa igama "yiFavorite Responsible / Philanthropic Travel Foundation" kwiiMbasa ezikhethiweyo zeAgents's Choice kunyaka wesibini olandelelanayo. Isibhengezo senziwe kumsitho wecandelo lezokhenketho laseCanada obelilindelwe kakhulu nge-1 ka-Okthobha ka-2020.
ISandals Foundation yasekwa ngo-2009 nguSekela-Sihlalo weSandals Resorts International, u-Adam Stewart, ukwandisa umsebenzi wobubele owawungowona msebenzi uphambili woluhlu lokubandakanya iiholide ezinetyebileyo okoko wavula iingcango zayo kwiminyaka engama-39 eyadlulayo.
“IiCaribbean zilikhaya, kwaye abantu bakhona bayintsapho. Sizimisele ukuphinda sityale amakhaya ethu kwaye sinikezele ngamathuba anceda abantu bommandla wethu bakholelwe kwaye bazenzele ikamva eliqaqambileyo kunye nezizukulwana ezizayo, utshilo u-Adam Stewart, uSekela Sihlalo weSandals Resorts International.
Amabhaso okuKhetha iiAgents asekwa ngo-1999 yiBaxter Media eseToronto kunye neempapasho zayo eziphambili, iCanada Travel Press kunye neCourier Courier. Uvavanyo lonyaka sesona sampulu sikhulu searhente zokuhamba zaseCanada ezikhetha ababoneleli ababathandayo bakhenketho kwiindidi ezahlukeneyo. Kulo nyaka, nkqu nangexesha le-COVID-19 ubhubhane, kufutshane nama-6,000 oochwephesha bokuhamba baseCanada bavota kwiindidi ezingama-38.
UStewart, okwanguMongameli weSandals Foundation, uqinisekisile wathi: “Siyabulela kakhulu ukwamkelwa ngabathunywa abangathethekiyo kwezotyelelo kulo lonke elaseCanada ngale mbasa. Liqabane elibalulekileyo elenza ukuba umsebenzi wethu ubekhona. Sikunye namalungu eqela lethu, iindwendwe kunye namaqabane ethu senze uphawu oluhle kubomi babantu abangaphezulu kwama-990,000. ”
Kwi-2019, iSandals Foundation yamkelwe liSebe lezoNxibelelwano lweHlabathi kwiZizwe eziManyeneyo njengomnye wemibutho eneenzame zokufaka igalelo ekuphumezeni i-Ajenda yoPhuhliso oluZinzileyo kunye neeNjongo zoPhuhliso oluZinzileyo (SDGs).
Nokuba lo mmandla ufumene ukungaqiniseki ngenxa yeempembelelo zobhubhane we-COVID-19, iSiseko sahlala sisisibane, sibonelela ngoncedo kunye nenkxaso kwiintsapho nakwiinkonzo zentlalo.
UHeidi Clarke, uMlawuli oLawulayo eSandals Foundation, uthe umbutho wesisa obhalisiweyo uzakuqhubeka nokwenza indima yawo ukuqinisekisa ukuba iziqithi ezisibhozo abasebenza kuzo zilungele ikamva elizinzileyo.
“Njengombutho wengingqi, ngumnqophiso wethu ukutyala imali kuphuhliso oluzinzileyo lweCaribbean. Sizakuqhubekeka ukomeleza uluntu, sityale imali kulwazi lokufunda nokubhala nakwezemfundo, sixhasa iindlela zokuphila, sibandakanye ulutsha, sincede abo badinga uncedo, someleze ukhathalelo lwempilo, sikhusele okusingqongileyo ngokusebenzisa iinkqubo ezitshintsha ubomi ezixhobisa ubomi, ”utshilo uClarke.
ISandals Foundation isebenza eJamaica, eSt.Lucia, eGrenada, eAntigua, eBarbados, eTurks naseCaicos, nakwiiBahamas ezisebenza kwimfundo, ekuhlaleni nakummandla.